Nge-24 kaDisemba i-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-24 kaDisemba i-Zodiac yiCapricorn-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Nge-24 kaDisemba i-Zodiac yiCapricorn-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ngoDisemba 24 yiCapricorn.
Uphawu lweenkwenkwezi: Ibhokhwe . Imele abantu abazalwe phakathi kukaDisemba 22 noJanuwari 19 xa iLanga liseCapricorn. Olu phawu lubonisa ukuba neenkani kodwa amabhongo kunye nokusebenza nzima okuzibandakanya nokuzithemba nokungaziphathi kakuhle.
Inkqubo ye- IConstricorn Constellation ebonakalayo phakathi kwe + 60 ° ukuya -90 ° yenye yeenkwenkwezi ezili-12 zodiac. Inkwenkwezi yayo eqaqambe kakhulu yi-delta Capricorni ngelixa ligubungela ummandla we-414 sq degrees. Ibekwe phakathi kweSagittarius ukuya eNtshona kunye neAquarius eMpuma.
Igama elithi Capricorn livela kwigama lesiLatini leMpondo yeBhokhwe. Eli lelona gama liqhelekileyo lisetyenzisiweyo ukuchaza uphawu lwe-zodiac ngoDisemba 24 uphawu lwe-zodiac, nangona kunjalo ngesiGrike bayibiza ngokuba yi-Aegokeros nakwiSpanish Capricornio.
Uphawu olwahlukileyo: Umhlaza. Kubuchwephesha beenkwenkwezi, le miqondiso ibekwe malunga nesangqa se-zodiac okanye ivili kwaye kwimeko yeCapricorn ibonakalisa uqeqesho kunye nobutsha.
Isimo sokuziphatha: Ikhadinali. Le modality yabo bazalwe ngoDisemba 24 iphakamisa intuition kunye nokwenziwa kwezinto ezintsha kwaye ikwabonelela ngemeko yabo entle.
Indlu elawulayo: Indlu yeshumi . Le ndawo imele indawo yooyise ye-zodiac. Icebisa ukuba ngabom nababhinqileyo abangamadoda kodwa kunye nomsebenzi kunye neendlela zentlalo umntu anokuzikhetha ebomini.
Umzimba olawulayo: ISaturn . Olu dibaniso lubonisa isithethe kunye nomdlandla. I-glyph yeSaturn yenziwe yicrescent kunye nomnqamlezo. USaturn ukwamele inkuthalo yezi ndawo zalapha.
Isiqalelo: Umhlaba . Eli nqaku lifanekisela ulwakhiwo kunye nokusebenziseka kwaye kuthathwa njengokulawula abantu abazithembileyo nabathobekileyo abanxulunyaniswe noDisemba 24 zodiac. Umhlaba ufumana intsingiselo entsha ngokunxibelelene nezinye izinto, ukumodareyitha izinto zamanzi nomlilo kunye nokudibanisa umoya.
Usuku lwethamsanqa: uMgqibelo . Kulawulwa nguSaturn olu suku lufanekisela igunya kunye nendlela yokusebenza kwaye kubonakala ngathi kunendawo efanayo yokuhamba okumangalisayo njengobomi babantu baseCapricorn.
Amanani anethamsanqa: 7, 8, 13, 18, 23.
Ulwazi oluthe kratya ngoDisemba 24 Zodiac ngezantsi ▼
nguwuphi umqondiso ongumhla we-15
pisces umntu ukuthandana pisces umfazi
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli-22
capricorn indoda ukukopela intombi
loluphi uphawu ngoFebruwari 6